के हो जन्डिस ? यो कसरी शुरु हुन्छ ?रोकथाम र उपचार - Daily Lokmandu
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/के हो जन्डिस ? यो कसरी शुरु हुन्छ ?रोकथाम र उपचार
के हो जन्डिस ? यो कसरी शुरु हुन्छ ?रोकथाम र उपचार
काठमाडौं । आँखाको सेतो भाग, हत्केला, अनुहार वा सम्पूर्ण शरीरमा पंहेलो रंग देखिएको अवस्थालाई जन्डिस भनिन्छ । जन्डिस आँफैमा रोग होइन । यो ५० भन्दा धेरै रोगको साझा लक्षण मात्र हो । जसरी ज्वरो आँफैमा रोग होइन, हजारौं रोगहरुको साक्षा लक्षण हो त्यसरी नै जन्डिस पनि शरीर भित्र हुने धेरै साधारण र असाधारण रोगहरुले बाहिर देखाउने एउटा लक्षण मात्र हो । जन्डिसको कहिल्यै पनि उपचार गरिदैन । बरु जुन कारणले जन्डिसको लक्षण देखाउंछ सोहि कारक तत्वको उपचार गरिन्छ ।
अधिकांश केसहरु अनुसार जन्डिस सामान्य रोगहरुरअवस्थाहरुबाट हुने गर्छन् र ३ हप्ताको आसपासमा आँफै सन्चो हुन्छ । यस्तो बेलामा डाक्टरले औषधि दिइहाले भने पनि शरीर चिलाउन नदिने, बान्ता हुन नदिने औषधि, भिटामिनहरु आदि वा कहिले काहीं केहि समयको लागि बाइल बन्ने प्रक्रिया मत्थर गर्ने बाइल स्टोन बन्न नदिने औषधि आदि दिन्छन्
नवजात शिशुमा जन्डिस : लक्षण, रोकथाम र उपचार
अधिकांश नवजात शिशुमा केही न केही मात्रामा जन्डिस देखापर्छ । प्रायः जन्मेकोे १ देखि ३ दिनभित्र यो देखापर्छ र ४ देखि ५ दिनसम्म बढ्दै जान्छ । १ देखि २ हप्ताभित्र जन्डिसको लक्षण हराएमा यसलाई सामान्य जन्डिस भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस्तोमा शिशुको अनुहारमा पहेँलो देखिन्छ । अनुहारमा मात्र देखिने जन्डिस गम्भीर प्रकृतिको नहुन सक्छ । तर, हत्केला र पैतालातिर पनि पहेँलो देखिन थाल्यो भने गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
नवजात शिशुमा धेरै मात्रामा बिलिरुविन बन्ने भएकोले जन्डिस देखिने गर्छ ।
रातो रक्तकोष टुक्रिएर बिलिरुविन बन्छ । यसलाई कलेजोले राम्ररी हटाउन नसक्दा जन्डिस देखापर्छ ।
जन्डिस भएमा के हुन्छ ?
सामान्य किसिमको जन्डिस कुनै असर नगरी आफैँ हराएर जान्छ ।
गम्भीर किसिमको कडा जन्डिस भएमा शिशुको कलेजो खराब हुने, शिशुको मस्तिष्कमा गम्भीर असर पर्ने, कालान्तरमा शारीरिक तथा मानसिक सुस्तता आउने र शिशुको मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
कस्ता शिशु जोखिममा ?
समय नपुगी (३७ हप्ताअगावै) जन्मेका कम तौल भएका शिशुमा यस्तो जोखिम हुन्छ ।
पर्याप्त मात्रामा स्तनपान गर्न नसकेका शिशुमा पनि जोखिम रहन्छ ।
रगतको समूह आमाको भन्दा फरक भएका शिशुमा पनि जोखिम देखिन सक्छ । शिशुलाई संक्रमण भएमा पनि यस्तो हुन्छ ।
शिशुमा आन्तरिक रक्तश्राव भएमा वा जन्मजात अन्य समस्या भएमा जोखिम रहन्छ ।
शिशुको अनुहारको छाला तथा आँखा पहेँलो हुनु जन्डिसको पहिलो लक्षण हो । यो अनुहारबाट सुरु हुँदै,घाँटी, छाती, पेट, हत्केला र पैतालासम्म पुग्न सक्छ । यसरी फैलिएमा गम्भीर अवस्था भनेर बुझ्नुपर्छ । स्वास्थ्यसंस्थामा गई बिलिरुविन जाँच गराएर जन्डिसको अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
गर्भावस्थामा आमाको रगतको समूहको परीक्षण गर्नुपर्छ ।
गर्भावस्थामा आमाले यथेष्ठ पौष्टिक आहार खानुपर्छ । जसले गर्दा स्वस्थ र सामान्य तौलको शिशु जन्मने सम्भावना बढ्छ ।
जन्मपश्चात् शिशुलाई दिनमा १० देखि १२ पटकसम्म स्तनपान गराउने गर्नुपर्छ ।
शिशुको उपचार कसरी गर्ने ?
घरमै न्यानो बनाएर राख्ने, पटक–पटक प्रशस्त मात्रामा स्तनपान गराउने । बिहानको कलिलो नपोल्ने घाममा १ वा २ घन्टा राख्ने । यसो गर्दा उज्यालो किरणले बिलिरुविन टुक्रिएर शरीरबाट बाहिरिन्छ । जन्मेको २४ घन्टाभित्र हत्केला वा पैतालासम्मै फैलिएर पहेँलो हुँदै गएमा तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ ।